‘चाडपर्वमा प्रहरीसगै नागरिक पनि चनाखो हुनुपर्छ’
चाडपर्वलाई लक्षित गदै नेपाल प्रहरीले पर्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमार्फत ४३ एसपी, १ सय २० डीएसपीसहित ४६ हजार ६ सय १९ जना प्रहरी परिचालन गरेको छ । यो जनशक्तिले दसैंका अलावा, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरेर सुरक्षा प्रदान गर्नेछ ।
चाडपर्वका बेला घरका ढोका फुटाएर चोर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चोरी गर्ने अथवा गरगहना र बहुमूल्य सामान चोरी गर्ने गिरोह सक्रिय हुने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले ११ हजार ४ सय १ प्रहरीलाई हतियारसहित फिल्डमा खटाएको छ । ४ देखि ६ जनाको समूह बनाएर गस्तीमा खटाउने र १३ हजार ५ सय १६ जनालाई लाठीसहित परिचालन गर्ने योजना प्रहरीको छ ।
प्रदेश १ को चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना भने कस्तो छ त ? यही बिषयमा अपराध न्यूजले १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय बिराटनगरका डिआईजी ठाकुर प्रसाद ज्ञवालीसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी यस्तो छ ।
चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना के छ ?
चाडपर्वलाई मात्र सुरक्षा योजना भन्न मिल्दैन । प्रहरीले सुरक्षा सधैभरी गरिने बिषय हो । खासमा चाडपर्वमा टाँढा टाँढाबाट घर फर्कीने र आफन्तजनसँग भेटघाट र टिका थाप्ने समय मानिन्छ । यो समयमा पव्लिकको बढी आवत जावत हुन्छ । र यो समयमा आर्थिक कारोबार पनि बढी हुने गर्छ ।
यही मौकाको फाइदा उठाउदै अपराधीक सोचका व्यक्तिहरु सकृय हुने गर्छन । उनिहरु अवसर कुरेर बसेका हुन्छन् । यस्ता मौकाहरु विफल बनाउन प्रदेश प्रहरीको निर्देशनमा सबै जिल्लामा चाडपर्व सुरक्षा योजना बनाइएको छ । अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत सुरक्षा योजना लागु भएको अबस्था छ ।
जिल्लागत हिसाबले त्यहाँको जनशक्ति, साधन स्रोत र जिल्लागत अपराधको अबस्था हेरेर हामीले सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिएका छौ । प्रदेश १ को १४ जिल्लाका सबै जिप्रकाले सुरक्षा योजना सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ ।
जनशक्ति अभावका बिच पनि सुरक्षा योजना लागु गरिएको अबस्था छ । कहीं अप्रिय घटना भए तत्कालै उद्धार वा प्रयोगमा ल्याउन एम्बुलेन्स, दमकल, मेडिकल टिमलाई तयारी अवस्थामा राखेका छौ ।
विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत पैदल तथा मोबाइल गस्ती, पेट्रोलिङ्ग, पिकेटिङ्ग, सरप्राईज चेकिङ, एम्बुसिङ, मोटरसाईकल गस्ती बढाएका छौ । चाडपर्वको समयमा सबारी दुर्घटना बढी हुने अबस्थालाई मध्यनजर गदै सबै जिल्लामा नागरिक साहयता कक्ष स्थापना गरिएको छ । सडकमा अन्य समय भन्दा बढी ट्राफिक प्रहरी परिचालन हुनेछन् ।
क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, मापसे सेवन, मनपरी भाडा र तिब्र गतिमा चलाउने सबारी साधनको निगरानी गर्न ‘सिभिल ट्राफिक प्रहरी’ समेत परिचालन गरिएको छ ।
सबारी साधनले यो समयमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने गर्छन । दुर्घटना हुदापनि बढी मानविय क्षति हुन्छ नि ?
अहिले तराईसगै पहाडी जिल्लामा पनि सबारी साधान र सडकको नेटवर्क बढेको छ । सडक बनेका छन् तर ग्राबेल । यस्ता सडकमा सबारी साधन गुडाउन जोखिम हुन्छन् । त्यसमा पनि ओभरलोड भएपछि झन बढी जोखिम हुने भयो ।
पहाडी भेगमा बनेका सडकलाई मध्यनजर गदै ट्राफिक प्रहरीहरुको दरबन्दी कायम हुन सकेको छैन । ट्राफिकसँग जति दरबन्दी छ त्यसैलाई बाडेर पहाडी भेगमा परिचालन गरिएको अबस्था छ ।
सबै ठाँउमा ट्राफिक पुराउन सकिएको छैन । तर ट्राफिक हुदा मात्र सबारी दुर्घटना नहुने भन्ने हैन । त्यसमा सडक, चालक र सबारी साधनको अबस्थाले ठुलो भुमिका पार्छ । मुख्य कुरा भनेको चेतना हो । चेतनाको स्तर बढाउन सकियो भने पहाडीसगै तराईका सडकहरुमा पनि सबारी दुर्घटनामा कमी ल्याउन सकिन्छ । अहिले सबै क्षेत्रमा खटिने प्रहरीले यात्रु र चालकहरुलाई सडकमै बिभिन्न कार्यक्रम गदै आएका छन् ।
‘यो समयमा सबै भन्दा बढी सचेत नागरिक आफै हुने हो । जब नागरिकनै सचेत भएपछि न चोरी न लुटपाट न सबारी साधान दुर्घटना हुने हो’ ।
अन्त्यमा सुरक्षाका केही टिप्स छन् ?
घर छोड्न लागेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा नलेख्नुस ।
सीसीटीभी चौबिसै घण्टा अन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुस ।
झ्यालढोका मिलेसम्म भित्रबाटै बन्द गर्नुस ।
साना ह्याम्मर छिराउने ठाउँ नराख्नुस ।
मुख्य ढोकामा बलियो ताल्चा लगाउनुस ।
आफू घरमा नहुने सूचना छिमेकीलाई दिनुस ।
गरगहना, पैसा र बहुमूल्य सामान घरमा नराख्नुस ।
प्रहरीलाई आफू घरमा नहुने सूचना गोप्य रूपमा टिपाएर जानुस ।